Ohlabane nePowerball uthi uzimisele ngokunikela ngo-$50m | News24
Ohlabane nePowerball uthi uzimisele ngokunikela ngo-$50m
New Hampshire - Owesifazane waseNew Hampshire owabamba iPowerball yemali elinganiselwa ku-$560m uhlela ukunikela ngo-$50m kwabahlwempu njengoba iqhubeka impi yokuthi lingadalulwa igama lakhe, kusho ummeli wakhe ngoLwesithathu.
INew Hampshire Lottery Commission yanikeza abameli balo wesifazane u-$264m - okuyimali eyasala ngemuva kokuthathwa kwentela. Abameli bathi lo wesifazane uzonikela ngo-$150 000 kwiGirls Inc kuthi u-$33 000 anikele ngawo kwi-End 68 Hours of Hunger.
Le mali ingeyokuqala azoyikhipha njengoba abameli bakhe bethi uzimisele ngokunikela ngemali ephakathi kuka-$25m kuya ku-$50m izikhawu ezehlukene kuze kube ungena egodini.
"Ikilayenti lami kalifuni zincomo, lifuna ukwenza into elungile nje kuphela," kusho uWilliam Shaheen, ongomunye wabameli balo wesifazane nokunguyena owengamele isikhwama iGood Karma Family Trust.
OLUNYE UDABA: Ubulawe wumdlavuza obesanda kubamba i-jackpot ka-R12m
"Uyazi ukuthi ziningi izinhlangano anganikela kuzo ezenza umsebenzi omuhle wokunikela emphakathini futhi eziswele imali, kepha okwamanje ubone kukuhle aqale ngalezi zombili ngenxa yokuthi uyazi ukuthi izingane ziyikusasa lesizwe," esho.
"Uma sikhulisa abantwana abaqotho, nakanjani sizoba nesizwe esiqotho."
Lo wesifazane wasayina ithikithi lakhe kulandela ukubamba i-jackpot ngomhlaka-6 Januwari.